Sida nin looga guuleysto | Niman qurux badan
Sida loo qabsado nin
Alicia tomero | 21/11/2021 11:51 | Lamaanaha iyo Galmada
Farshaxanka nin ku guuleysto waa wax lagu soo dhaqmayay qarniyadii oo dhan. Qaabka seduction ayaa isbeddelay sannadihii la soo dhaafay iyo farsamooyinka ku habboon ee soo jeedinta wanaagsan ayaa aad uga badan ilaa taariikhda.
Dhammaan waxyaalaha aasaasiga ah ee maanta lagu dhaqmo waxay leeyihiin muujin badan. In kasta oo wax badan ay beddeleen hab dhaqankeenna ama doonista xorta ah, had iyo jeer Waxaa jira siyaabo lagu guuleysto nin taas oo u dhiganta qaab sax ah.
Ha iloobin in marka ay timaado sasabasho ama guuleysiga had iyo jeer waxay ahayd dhaqan raggu leeyahay. Laakiin nafteena ma khiyaanayn doonno, hadda dumarku sidoo kale waxay rabaan inay qabsadaan guushooda, taasna waxay u baahan yihiin inay masuul ka noqdaan oo ay si faahfaahsan u ogaadaan. sida loo bilaabo qabsashadaas.
1 Is baro oo tus sida aad tahay
2 Sidee ayay tahay in xidhiidhkaagu noqdo?
3 Iga dhig aan ku xiisay
4 Siro yar dhig
5 Ixtiraam qofkaas oo waqtigooda sii
Is baro oo tus sida aad tahay
Waa qiimeynta ugu fiican ee aad u soo bandhigi karto nin ay tahay inuu kula kulmo. Waan ognahay taas jirku wuxuu ku dhacaa tayada ugu horeysa taas oo marka hore ka muuqata, laakiin waxaa jira rag badan oo qiimeeya shakhsiyadda haweeneydaasi yeelan doonto.
Ka dhig xidhiidhkaas inuu dhaco waa inaad muujisaa inaad jirto.
Dhoola cadeyn oo is baro, inaad tahay naftaada. Ma iska yeelyeeli karno kuwa aan ahayn, sababtoo ah haddii aan rabno taariikho badan ayaa muujin doona.
Waxaa jira isku kalsoonow, in aad ammaan ku leedahay hadalkaaga iyo ficilkaaga.
Jirkaagu maaha inuu noqdo waxa ugu muhiimsan, ma ahaan kartid mid qumman, laakiin muuqaalkaagu waa inuu noqdaa mid nadiif ah oo la qurxiyey. Waa inaad noqotaa qof isla weyn, timo sax ah iyo isqurxin leh, waxaadna ku dari kartaa cadar muujinaya shakhsiyaddaada.
Sidee ayay tahay in xidhiidhkaagu noqdo?
Ha lumin dhoola cadeyntaada taasi waa isha ugu weyn ee bilaabida saaxiibtinimo qurux badan. Isha ka eeg xataa haddii aad xishoonayso, laakiin waa mid ka mid ah canaasiirta tusinaysa ammaanka. Wadahadalku waa inuu noqdaa mid isgaadhsiineed. Ha sugin inaad noqoto jilaa oo had iyo jeer ka hadal sheekooyinkaaga, sidoo kale dhegayso.
Si fiican u dhegayso wax kasta oo aan ku idhaahdo, ku taageer go'aankiisa, u sii talo, una furfurnaada inaad siiso nooc kasta oo talo ah oo waxtar leh. Dumarku waxay haystaan ​​qalab badan oo faa'iido leh oo ay awoodaan in aan taageerno oo dhan, iyo in ninku qadarin doono.
Iska ilaali in lagu murmo arrimo aan muhiim ahayn. mar walba ku raaxayso oo muuji xamaasadaada wakhtigaas weyn. Waa inaad had iyo jeer muujisaa naxariis iyo madadaalo si loo dhaqaajiyo gariir wanaagsan. Si joogto ah uma doodi kartid, ugamana xanaaqi kartid dhibaatooyin yaryar, sababtoo ah taasi waxay kuu horseedi doontaa inaad ka baxdo.
Iga dhig aan ku xiisay
Khalad maaha in aad dhegaysato dhegaysigeeda iyo u bandhig xiisahaaga inuu ku jecel yahay. Laakin ha siin awood aad u badan, ka dhig in ay ku tusto adiga sidoo kale waxaad leedahay noloshaada.
Ballantaada waad awoodaa ku sheekee, baashaal, la kulan... si kasta oo aad rabto in ay taasi weligeed sii jirto, waad awoodaa si lama filaan ah u soo afjar ciyaarta. Waxaad cudur daar ka dhigi kartaa, in dantaadu ay weli jirto, laakiin sidoo kale waa inaad ka soo qaybgashaa waajibaadyo kale. Sidan oo kale, waxaa looga tagi doonaa isagoo doonaya inuu dib ugu laabto si uu ballan kale u qabto oo uu sidaas kuugu fikiro oo uu kuu xiiso.
Siro yar dhig
Qaybtani waxay la xidhiidhaa awood la'aanta qofka kale. Waa in lagu soo gabagabeeyaa ma quusan kartid naftaada taariikhaha ugu horeeya oo dhan sii Sidan oo kale waxay u arkaan inay haystaan ​​wax kasta oo la kasbaday oo ay lumin doonaan dhammaan xiisaha mustaqbalka fog.
Aan wax yar ka ogaado sida aad tahay. Waxaad u soo bandhigi kartaa waxa ugu fiican taariikhaha ugu horreeya si uu xiisaha u qabo isaga, laakiin had iyo jeer wax badan badbaadi naftaada si uu si deggan u ogaado. Waa sida ciyaar oo kale, waa in aad si tartiib ah u abuur sirtaas, in danta la ilaaliyo. Laakin sidoo kale ha u qaadin meesha ugu sareysa, waa inaad muujisaa xiisahaas oo aadan ku boodin barkada marka ugu horeysa.
Ixtiraam qofkaas oo waqtigooda sii
Dhammaanteen waxaan u baahanahay booskeena mana ka fikiri karno si lama filaan ah bilaabi xiriir dhab ah habeen. Waxaa laga yaabaa in ujeedooyinkaagu kala duwan yihiin oo aad jeclaan lahayd inaad waqti badan la qaadato isaga si aad u barato isaga oo aad ugu raaxaysato wehelkiisa. Waa inaadan muujin xiiso badan oo aadan ku qasbin xiriir, mar kasta oo la dareemo rajo-xumada, way ka sii fogaan doontaa. Waa inaad u ogolaataa wiilkaas inuu sidoo kale ku raaxaysto noloshiisa, inuu sii wado la falgalka waxyaabaha uu jecel yahay iyo inuu waqti la qaato asxaabtiisa.
Waa inaad noqotaa haweeneyda uu aamini karo, kaas oo aad u noqon karto gabaad ahaan marka aad dhibaato haysato. Raaxada iyo dareenka nasashada qof waa mudnaanta qof kasta. Way jecel yihiin la fur qof dhegaysan doona, si ay u sheegaan kalsooni darrada, cabsidooda iyo in ay helaan cid iyaga caawisa. Haddii aad intaas oo dhan ilaaliso, waad awoodaa qof ag jooga taasi waxay ku tusinaysaa dhalanteedkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo qabsado nin
Ninka guursaday muxuu sameeyaa markuu naag kale jeclaado